Matipi uye mapfupi ekhibhodi e LibreOffice | Linux Vakapindwa muropa
Matipi akakosha eLibreOffice
Isaac | | Free Software, Linux software
LibreOffice rave hofisi suite inonyanya kukosha muhara yemahara software, pamwe nekufambira mberi kwakakosha kubvira payakatanga seforogo yeOpenOffice mushure mekufamba kweOracle mushure mekutengwa kweSun Microsystems. Munguva pfupi yapfuura ivo vari kusimudzira imwe yavo isina kusimba mapoinzi, iyo graphical interface iyo ichiri kure nekukwana uye inoratidzwa seimwe rematambudziko makuru kana zvasvika pakatarisana neMicrosoft Office.
Kunyangwe izvi, zvinoenderana ne kuwanda kwemafomati, vese vanozvarwa kuMicrosoft Office uye mafomati akavhurika pachawo, vanova vagari veko vanoshanda neLibreOffice uye mamwe emahofisi emahara. Uye zvakare, izvo zvinoitika maererano nemabasa eichi suite uye cheMicrosoft zvakaenzana uye basa rakafanana rinogona kuitwa. Ndinoomerera, ndichizvitsoropodza, kuchine zvimwe zvinongedzo zvekugadzirisa uye kugadzirisa, asi ndeimwe yedzakanakisa dzimwe nzira dziripo.
Asi hapana software kana inoshanda sisitimu yakanaka mumaoko emumwe munhu asingakwanise kutora mukana wayo, nekuti unenge uchitambisa mukana. Naizvozvo, muchinyorwa chino tichaenda kupa akateedzana e manomano eiyo LibreOffice suite izvo zvinoshandura nzira yaunoshanda nayo, zvichiita kuti mashandisiro ayo ave anonakidza, akareruka, anobudirira uye anoshanda, ayo mushure mezvose zviri izvo vashandisi vese vari kutsvaga, pamusoro pekushandisa mukana weanoshanda.
Uye zvandataura mundima yapfuura zvakakosha, nekuti zvichemo zvakawanda kana kuora mwoyo kunotora vashandisi pavanosvika muLibreOffice uye kuti vanobva kuMicrosoft Office ivo vanodzikiswa kusvika pakusaziva mashandisiro kana kutora mukana wehunhu hweLibreOffice sezvavaive vachiita muMS Office, zvichivaita kuti vapenge nekuvaita kuti vadzokere kuRedmond suite. Asi kana iwe uchiziva kuzvigona uye kujairira kwazviri, ungangodaro usarasikirwa nekutengesa software.
1 Matipi eLibreOffice
1.1 Matipi uye matipi ekuvandudza mashandiro eLibreOffice
1.2 Yekhibhodi mapfupi e LibreOffice
1.3 Humwe hunyengeri hwekushandisa kwemazuva ese LibreOffice
Matipi mazhinji uye matipi aripo pamambure eLibreOffice anonyanya kuitirwa kugadzirisa mashandiro awo, asi mune ino megapost hatidi kutarisa chete pamatanho ekuita, asi ive yakati wandei uye ufukidze mamwe mapoinzi izvo zvinotibvumidza isu kuvandudza mukushandisa kwedu kwemazuva ese patinoshanda nemahofisi magwaro uye nekupa kugona.
Matipi uye matipi ekuvandudza mashandiro eLibreOffice
Saka kuti yedu LibreOffice ive chimwe chinhu nekukurumidza, tichidzivirira kutambisa akakosha masekondi ayo anogona kuwedzera kune yedu nguva yebasa kuti tiwedzere kugadzirwa uye kugona, isu tinogona kugadzirisa zvimwe mune suite. Kana iwe ukavhura chero ezvirongwa zvakabatanidzwa muhofisi suite, senge LibreOffice Munyori, unogona kuenda kuTurusi tabu pane yepamusoro menyu uye wobva wadzvanya pane Sarudzo.
Kurudyi iwe uchaona kuti pane akati wandei zvinhu zvekusarudza, mukati meLibreOffice iwe uchaona sarudzo inonzi Memory. Tinoratidzwa nhevedzano ye ndangariro dzinoenderana marongero. Zvatinofanira kubata ndezvi:
Deredza iyo Nhamba yematanho muUndo paramende. Izvi zvinoderedza huwandu hwenguva iwe dzaunogona kurova bhatani rekudzosera kuti udzokere kune izvo zvaunogadzirisa mune zvinyorwa zvinyorwa. Iyo yakakwira iyi nhamba ndeye, iyo inowedzera kuchinjika iyo inokutendera iwe kana zvasvika pakudzokera kumashure, asi iyo yakawanda ndangariro iyo ichatora nekuve nekuchengetedza mamwe matanho ...
La Mufananidzo Cache chimwe chikamu chakakosha. Unogona kuseta 256MB yakakwira kana ukasashandisa yakawandisa mifananidzo mune yako zvinyorwa pepa, asi kana ukashandisa zvakawanda, ungangoda kusiya zvimwe. Uye kana iwe uchingoishandisa chete kunyora, unogona kuidzikisa kusvika padiki kuchengetedza memory.
Chinhu Chirangaridzo, unogona kuiisa kungangoita 50MB. Mune ino kesi, kana magwaro ako asiri "multimedia" chaiwo unogona kuodhaunirodha usingatyi, nekuti nzvimbo ino yakachengeterwa kubata zvinhu zvisiri zvinyorwa kana mifananidzo, senge mifananidzo, odhiyo, nezvimwe.
Si isu tinogadza iyo cache cache ndangariro mushure me 00:05 min, nguva. Ndinoomerera kuti, zvese izvi zvinoenderana nehuwandu hwendangariro hwauinahwo muhurongwa hwako uye mashandisiro aunopa kune LibreOffice, aya manhamba ari kuratidza ... Izvo zvakafanana kune cache yezvinhu zvakaiswa.
Imwe sarudzo yatinogona kubata ndeye kana tichida izvozvo LibreOffice inotanga nehurongwa, chimwe chinhu chandisingakurudzire. Zvinogona kuve zvakanaka kana ukaishandisa mazuva ese uye icho chinofanirwa-kuve chebasa rako, asi kana iko kushandiswa kuri kwakawanda, chinhu chega chatichaita kuwedzeredza kutanga uye kuchinonoka.
Kuenderera mberi nezvinhu, mukati meLibreOffice unogona zvakare kuwana iyo sarudzo inonzi Yepamberi. Mariri unogona kubata mamwe maitiro, senge tekinoroji Java, iyo yaunogona kudzimasezvo isingawanzoshandiswa uye musiyano wekuita uri pachena.
Kana zvakadaro maturusi ekushandisa atinoona Mune main menyu, kana paine imwe yausina kumboshandisa, bvisa zvirinani uye ichavandudza agility. Nezve izvo, kubva kuchiratidziro chikuru, enda kune iyo Tarisa tebhu uye wozotora mabharanzi ausingade kuti aonekwe. Zvisinei, iwe unoziva kuti kana iwe uchizozvida ivo mune ramangwana unogona kuzvimisazve nekudzosera danho iri. Mamwe matipi kana matipi ekuvandudza mashandiro ari kuremadza mitemo uye mameseji emavara kubva kuKutarisa tebhu yemenyu huru, zvichibatsira kuve nehutsanana uye nekukurumidza GUI.
Kana iwe uchida iwe unogona zvakare kuenda kune Zvishandiso, Auto kururamisa sarudzo uye muIzwi reKupedzisa menyu, uncheck iyo Inogonesa izwi rekupedzisa bhokisi. Kana iwe usiri kuda kana usingashandise izwi Autocompletion, iro mumaonero angu dzimwe nguva rinogumbura, unogona kubatsira mukuita.
Pakupedzisira ini ndaikurudzira uninstall maduramazwi ausingashandise. Vari kutora nzvimbo pasina. Kuti uite izvi, enda kune Zvishandiso, Sarudzo uyezve mu Menyu Zvirongwa menyu. Kubva ipapo unosarudza iyo Yekubatsira Rubatsiro sarudzo uye woongorora mamodule auinayo kubvisa iwo ausingade.
Yekhibhodi mapfupi e LibreOffice
Chimwe chezvinhu chinogona kutiponesa nguva, kana kuti zvirinani chengetedze, ndizvo mapfupi ekhibhodi. Kurumidza kuwana kuburikidza nekubatanidzwa kwemakiyi. Kuti unzwisise zvirinani kune muverengi, pachinzvimbo chekutsanangura imwe neimwe uchishandisa mapoinzi, ini ndinozviisa mutafura iyi:
F5 Vhura bhurawuza
F11 Vhura iyo Styles uye Fomati fafitera
F4 Vhura iyo dhatabhesi sosi dhata
3xDzvanya pamhepo Sarudza mutsara wese
4xDzvanya pane zvinyorwa Sarudza ndima yese
2x Dzvanya pashoko Sarudza izwi
Ctrl + Sarudza zvinhu Isa chimwe chiito pavari
Ctrl + Imba Enda pakutanga kwegwaro
Ctrl + End Enda kumagumo egwaro
Ctrl + Space Inogadzira nzvimbo pakati pemashoko anovabvumira kuti vasaparadzaniswe panopera mutsetse
Ctrl + Miseve Famba pakati pemashoko
Ctrl + Shift + Miseve Sarudza zvinyorwa nemazwi
Ctrl + Shift + V Namatira pasina fomati
Ctrl + Del Delete zvinyorwa nemashoko
Ctrl + E Sarudza zvinyorwa zvese mugwaro razvino kana sero mutafura
Ctrl + G Sevha gwaro
Ctrl + Mouse scroll wheel Chinja zoom
Izvi maererano nekushandisa kwakawanda kweLibreOffice, asi kana iwe uchida mapfupi echimwe chirongwa, unogona kutarisa patafura iyi ye LibreOffice Munyori:
F2 Formula bhaa
Ctrl + F2 Insert munda kuraira
F3 Autifill mavara
Ctrl + F3 Rongedza otomatiki zvinyorwa
F4 Vhura dhata sosi kuona
Shift + F4 Sarudza inotevera furemu
F5 Bvumira / dzima Bhurawuza
Ctrl + Shift + F5 Bhurawuza yakaitwa enda kunhamba peji
F7 Cheki cheki
Ctrl + F7 Mashoko anoreva zvakafanana
F8 Kuwedzera modhi
Ctrl + F8 Activate / deactivate mamaki
Shift + F8 Yakawedzera sarudzo modhi
Ctrl + Shift + F8 Bvisa sarudzo modhi
F9 Gadziridza minda
Ctrl + F9 Ratidza munda kuraira
Shift + F9 Verenga tafura
Ctrl + Shift + F9 Gadziridza ekuisa minda uye zvinyorwa
Ctrl + F10 Gonesa / regedza asiri-anodhindwa mavara
F11 Dzorera iyo Style uye Fomati hwindo uye bvisa
Shift + F11 Gadzira chimiro
Ctrl + F11 Tarisa pane iro dhizaini bhokisi
Ctrl + Shift + F11 Gadziridza chimiro
F12 Shandisa manhamba
Ctrl + F12 Isa kana kugadzirisa matafura
Shift + F12 Shandisa bara
Ctrl + Shift + F12 Regedza Kuverenga / Bullet
Ctrl + A Sarudza zvese
Ctrl + J Yakaruramiswa
Ctrl + D Dhinda mutsetse
Ctrl + E Yakatemerwa
Ctrl + H Tsvaga uye Tora
Ctrl + Shift + P Chinyorwa
Ctrl + L Rongedza kuruboshwe
Ctrl + R Gadzirisa chaipo
Ctrl + Shift + B Subscript
Ctrl + Y Dzosera chiito chekupedzisira
Ctrl + 0 Nyorera default ndima dhizaini
Ctrl + 1 Nyorera Heading 1 ndima yemaitiro
Ctrl + 2 Nyorera Heading 2 ndima yemaitiro
Ctrl + 3 Nyorera Heading 3 ndima yemaitiro
Ctrl + 4 Nyorera Heading 4 ndima yemaitiro
Ctrl + 5 Nyorera Heading 5 ndima yemaitiro
Ctrl + Plus kiyi Inoverenga mavara akasarudzwa uye inoteedzera mhedzisiro ku clipboard.
Ctrl + - Zvingasarudzwa zvinyorwa; bhuku reshoko remashoko.
Ctrl + Shift + - Isiri-kutyora script (isina kushandiswa kwe hyphenation)
Ctrl + * Mhanya macro munda
Ctrl + Shift + Space Nzvimbo isiri-yekuparadzanisa. Idzo nzvimbo hadzisi kushandiswa mukufungidzira uye hadziwedzerwe kana iwo mavara akaruramiswa.
Shift + Pinda Mutsetse unopwanya pasina ndima shanduko
Ctrl + Pinda Chinyorwa peji peji kuputsa
Ctrl + Shift + Pinda Column break mune akawanda-kodhi zvinyorwa
Alt + Pinda Inoisa nyowani, isina nhamba mundima. Izvo hazvishande kana iyo inotora iri kumagumo erondedzero.
Ruoko rworuboshwe Fambisa chinongedzo kuruboshwe
Shift + Kurudyi Museve Fambisa chinongedzo kuruboshwe nesarudzo
Ctrl + Kuruboshwe Museve Enda kune kutanga kweshoko
Ctrl + Shift + Kuruboshwe Museve Sarudza izwi neshoko kuruboshwe
Rudyi museve Fambisa chinongedzo kurudyi
Shift + Kurudyi Museve Fambisa chinongedzo kurudyi nesarudzo
Ctrl + Kurudyi Museve Enda pakutanga kweshoko rinotevera
Ctrl + Shift + Kurudyi Museve Sarudza izwi neshoko kurudyi
Upfumo Fambisa chinongedzo mutsetse mumwe kumusoro
Shift + Kumusoro Museve Sarudza mitsara kumusoro
Ctrl + Kumusoro Museve Fambisa iyo inotora pakutanga kweiyo ndima yapfuura
CtrlShift + Kumusoro Museve Sarudza pakutanga kwendima. Iyo inotevera kiyi inowedzera kusarudzwa kusvika pakutanga kwendima yapfuura.
Pasi museve Fambisa chinongedzo pasi mutsetse mumwe
Shift + Pasi Museve Sarudza mitsara pasi
Ctrl + Pasi Museve Fambisa chinongedzera kumagumo kwendima.
CtrlShift + Pasi Museve Sarudza kusvika kumagumo kwendima. Iyo inotevera kiyi inowedzera kusarudzwa kusvika kumagumo endima inotevera
kudzidziswa Enda pakutanga kwemutsara
Musha + Shift Enda wosarudza kutanga kwetambo
Fin Enda kumagumo kwetambo
End + Shift Enda wosarudza kumagumo kwetambo
Ctrl + Kumba + Shift Enda pakutanga kwegwaro nesarudzo
Ctrl + End + Shift Enda kumagumo egwaro nesarudzo
Ctrl + Peji Kumusoro Fambisa chinongedzo pakati penyaya nemusoro
Ctrl + Peji Pasi Fambisa iyo cursor pakati pezvinyorwa uye tsoka
Insert Shandisa / shandisa Insert mode
PageUp Screen peji kumusoro
Shift + Peji Kumusoro Screen peji kumusoro pamwe nesarudzo
Peji pasi Screen peji pasi
Shift + Peji Pasi Screen peji pasi nesarudzo
Ctrl + Del Delete iwo mavara kusvika kumagumo ezwi
Ctrl + Backspace Delete iwo mavara kusvika pakutanga kweshoko
Ctrl + Del + Shift Delete iwo mavara kusvika kumagumo kwechirevo
Kudzora + Shift + Backspace Delete iwo mavara kusvika pakutanga kwechirevo
Ctrl + Tab Paunenge uchipedzisa izwi otomatiki: Inotevera zano
Kudzora + Shift + Tab Paunenge uchipedzisa izwi otomatiki: Yepamberi zano
Ctrl + Alt + Shift + V Inonamira zvirimo mubhodhibhodhi senge yakajeka zvinyorwa.
Ctrl + pinda kaviri kana Ctrl + Shift + F10 Kurumidza dhoko uye dhonza akawanda windows.
Para MaharaOffice Calc, unogona kushandisa:
Ctrl + Imba Inofambisa iyo inotora kuenda kuchitokisi chekutanga pane pepa (A1).
Ctrl + End Inofambisa iyo cursor kune yekupedzisira sero ine data.
kudzidziswa Inofambisa iyo cursor kune yekutanga sero remutsara wazvino.
Fin Inofambisa iyo cursor kune yekupedzisira sero mumutsara wazvino.
Shift + Imba Sarudza masero kubva pane yazvino kuenda kune yekutanga sero remutsara wazvino.
Shift + Kupera Sarudza masero kubva ikozvino kusvika pakupedzisira mumutsara wazvino.
Shift + Peji Kumusoro Sarudza masero kubva parizvino kuenda kune peji rimwe pamusoro pekoramu yazvino kana wedzera kusarudza kwazvino kumusoro peji rimwe.
Shift + Peji Pasi Sarudza masero kubva pane razvino kuenda kune rimwe peji pazasi pekoramu yazvino kana kuwedzera yazvino sarudzo peji rimwe pasi.
Ctrl + ← Inofambisa iyo inotora kuruboshwe kumucheto kwenzvimbo yedata yazvino. Kana iyo ikholamu kuruboshwe rwechitokisi iyo ine iyo inotora isina chinhu, iyo inotora inoenda kuruboshwe kune inotevera ikholamu ine data.
Ctrl + → Inofambisa iyo cursor kuenda kurudyi kumucheto kwenzvimbo yedata yazvino. Kana iyo ikholamu kurudyi kwesero rine iyo cursor isina chinhu iyo inotora inoenda kurudyi kune inotevera ikholamu ine data.
Ctrl + ↑ Inofambisa iyo cursor kumucheto wepamusoro wenzvimbo yazvino yedata. Kana mutsara uri pamusoro pechitokisi une chitupa usina chinhu saruro inokwira kumutsara unotevera une data.
Ctrl + ↓ Inofambisa iyo cursor kuenda kumucheto wezasi kwenzvimbo yazvino yedata. Kana mutsetse uri pazasi pechitokisi chine chitupa usina chinhu, chitupa chinodzika kumutsara unotevera une data.
Ctrl + Shift + museve Inosarudza ese maseru ane data kubva kuchitokisi chazvino kusvika kumagumo ehurefu hweseru yemadhata munzira imwechete seye museve wakadzvanywa. Kana ikashandiswa kusarudza mitsara nemakoramu pamwechete rectangular maseru renji inosarudzwa.
Ctrl + Peji Kumusoro Chinja rimwe jira kuruboshwe.
Ctrl + Peji Pasi Chinja rimwe jira kurudyi.
Alt + Peji Kumusoro Mipumburu imwe skrini kuruboshwe.
Alt + Peji Pasi Mipumburu imwe skrini kurudyi.
Ctrl + Peji Kumusoro Inowedzera pepa rapfuura kusarudzo yazvino pepa. Kana iwo ese machira mune pepa rekushandira akasarudzwa iyi kiyi yekubatanidza inosarudza chete iro rapfuura pepa. Inoshandura pepa rapfuura kune razvino.
Ctrl + Peji Pasi Inowedzera pepa rinotevera kusarudzo yemashizha yazvino. Kana iwo ese machira mune pepa rekushandira akasarudzwa iyi kiyi yekubatanidza inosarudza chete rinotevera pepa. Inoshandura rinotevera jira kune razvino iri.
Ctrl + * Inosarudza iyo data dunhu uko iko iko iko iko iko cursor.
Ctrl + / Inosarudza rondedzero yenzvimbo dzakarongeka panowanikwa chituko.
Ctrl + plus kiyi Pinza masero (semukati memenu Insert - Masero)
Ctrl + - Delete maseru (semumenyu Hora - Delete Maseru)
Pinda kiyi (mune yakasarudzwa renji) Inofambisa iyo inotora pasi sero rimwe munzvimbo yakasarudzwa.
Uye pakupedzisira, ye LibreOffice Base:
F6 Svetuka pakati penzvimbo dzeiyo dhizaini dhizaini.
Delete Inobvisa tafura kubva pamubvunzo dhizaini.
Tab Sarudza mutsara wekubatanidza.
Shift + F10 Vhura menyu yemamiriro.
F5 Mhanya mubvunzo
F7 Wedzera tafura kana mubvunzo
Alt + pasi museve Vhura iyo combo munda.
Alt + Kumusoro Museve Vhara iyo combo munda
Shift + Pinda Isa mutsara mutsva
Upfumo Isa chinongedzo pamutsara wapfuura.
Pasi museve Isa chitupa chako pamutsara unotevera.
Entrar Pedzisa iyo yekupinda mumunda uye isa iyo cursor mune inotevera munda.
Ctrl + F6 Nzvimbo dzinotarisisa (kana zvisiri mudhizaini dhizaini) pane yekutanga kudzora munda. Munda wekutanga unoenderana neyekutanga munda mune fomu browser chinyorwa.
Ctrl + Re Page Svetuka pakati pematebhu.
Ctrl + Peji Av Svetuka pakati pematebhu.
F6 Svetuka pakati pemahwindo.
Tab Sarudzo yeminda yekutonga.
Shift + Tab Sarudzo yeminda yekutonga kune yakatarisana nedivi.
Ctrl + Pinda Inoisa yakasarudzwa control field.
Ctrl + Imba Inoshandura yakasarudzwa nzvimbo yekudzora mumatanho e1mm munzira kwayo.
Ctrl + Tab MuHodhi Point modhi inosvetukira kune inotevera mubato.
Shift + Ctrl + Tab MuHodhi Point modhi inosvetukira kune yapfuura mubato.
Esc Siya iyo yazvino sarudzo.
Kune akawanda mamwe mapfupi ekhibhodi e LibreOffice, asi aya ndiwo anonyanya kushandiswa, kunyanya kufamba. Kuti uwane rumwe ruzivo iwe unogona kuwana iyo LIbreOffice rubatsiro webhusaiti.
Humwe hunyengeri hwekushandisa kwemazuva ese LibreOffice
Mamwe maturusi anonakidza anosanganiswa neLibreOffice uye ayo aunofanirwa kuziva nezvayo ndiwo sarudzo Tumira kune pepa PDF iyo iwe yaunogona kuwana muFaira menyu, ichikubvumidza iwe kuti uchengetedze gwaro muPDF fomati, chimwe chinhu chinokosheswa uye icho munguva yakapfuura chaive chisingawanikwe muMicrosoft Office uye waifanira kuisa mamwe mapurogiramu kana ekuwedzera kuti ugone kuzviita. Iyo inosanganisirwa muLibreOffice kubva pakutanga uye inogona kusevha yakawanda basa kushandura zvinyorwa kuita PDF.
Iwe unofanirwa zvakare kuziva kuti LibreOffice ine nhamba huru yeZvimwe kuisa, chimwe chinhu senge plugins kana maAddons iwe aunowana mune mamwe mabhurawuza ekuwedzera kugona kwavo. Mazhinji acho anonakidza uye kuti iwe unogona kuwana pano nezvikamu. Sarudza iyo yaunoda kana iyo yaunoda uye iwe unogona kudhawunirodha uye woisa iyo .oxt iyo inotorwa nekudzvanya kaviri pairi.
Zvimwe zvakawanda zvaunofanira kuziva, mukana wekushandura kutaridzika kwenzvimbo yako yebasa. Kunyangwe iwe uchigona kuzvishandura zvakadzama, asi iwe unogona chinja ruvara rwemberi yechirongwa ichi kuti chiwedzere kufadza ziso maererano nerunako. Kuti uite izvi, enda kumenyu yeMidziyo, wobva wasarudza, uye muLibreOffice unogona kusarudza Chitarisiko. Muchikamu chino unogona kushandura iwo mavara nezvaunoda, asi nekuwedzera, mune yakasarudzika sarudzo iri pamusoro peKuonekwa, iwe unowanawo chishandiso chekumisikidza yako wega kana akagadzirira-akagadzirwa madingindira ...
Kana iwe uine chero mibvunzo kana mazano, iwe unofanirwa kusiya komendi. Mimwe mipiro yezvidobi iwe yaunoziva uye isina kuisirwa mune rondedzero ichagamuchirwa, saka isu tichabatsira vese vaverengi kuvandudza basa ravo rezuva nezuva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Matipi akakosha eLibreOffice
Ndinoda zvinyorwa izvi… maita basa
manuel ramirez akadaro
Ndine urombo asi unogona kundibatsira nezvandingaite nemirairo ctrl + shift + o
Pindura manuel ramirez
Nelson CeA akadaro
Pane matambudziko neshanduro yekuchinja + f3, kubvira painoiswa mushoko remutsara, kwete chete iro izwi rinoshanduka kubva pamusoro kusvika padiki kana zvinopesana, asi zvakare mamwe mazwi mumutsara anochinjwa uye kwete chete izvo zvinodiwa shanduko . Zvinoita here kuti iwe unogona kundibatsira nemamiriro ezvinhu aya?
Pindura kuna Nelson CeA
hector angle akadaro
hapana chimwe cheicho chinondishandira, maita basa
Pindura kuna hector angulo
Kune chidzidzo chavasina kupedza kugadzirisa, uye icho chiri kunyora chinyorwa chakareba cheruzivo. Zvakanaka, unogona kutsiva maviri mapfupi madheshi eiyo yakareba dash, asi UNOFANIRA kuvapa nzvimbo yekuti vatendeuke. Zvinoitika kuti mushure mehurefu hwakareba HAPANA nzvimbo, saka unofanirwa kumanikidza backspace inotevera. Saka kuti ugadzire dash refu iwe unofanirwa kuita zvinotevera:
Shoko: Madiki mapfupi. (2 kudzvanya mumutsara, zvine simba kwazvo)
Vhura Hofisi: maviri mapfupi madheshi, nzvimbo, backspace kiyi. (4 zvinorema kudzvanya)
Mune novel ine yakawanda yekutaurirana izvi hazvigoneke.
Uff, chinyorwa ichi ndechechinyakare chaizvo, asi sezvo zuva rekuburitsa risingawanikwe, imwe inopambadza nguva kupinda LibreOffice kuyedza kugadzirisa chimwe chinhu chisisiri mumenu yekusarudza: ndangariro. Zvingave zvakanaka kuti iwo mapeji anopa aya "manomano" agadzirise zvirimo sezvo shanduro dzezvirongwa dzichichinja kumisikidza, kana zvirinani, kuisa zuva umo zvinyorwa izvi zvinoburitswa. Iyo yakazara kutambisa nguva ...
Ndinoda kuziva kana paine nzira yekudimbudzira yekuseta zuva (ranhasi), kwete fomula sezvo ichichinja zvichienderana nezuva raunovhura faira. Ndisati ndashandisa (CTRL +,)
Mahwindo anodonha pazasi pe90% kekutanga mumakore gumi
Tiza kubva kuTarkov: mutambo wevhidhiyo unosvika kune yake Alfa